« Mada mix dance » : raikitra ny « trophée de Madagascar » voalohany | NewsMada
« Mada mix dance » : raikitra ny « trophée de Madagascar » voalohany
Hotanterahina, ny alahady izao etsy amin’ny kianja mitafo etsy Mahamasina, ny fifaninanana fiadiana ny « trophée de Madagascar » eo amin’ny « danse de salon » sy ny dihy fanatanjahantena. Sambany izy ity ary tafiditra ao anatin’ny fifaninanana manana ny « label » antsoina hoe « Mada mix dance » (MMD). Mikarakara ny hetsika kosa ny Tango club de Madagascar.
Mivelatra amina sokajy telo ny fifaninanana : ny eo amin’ny « cinq danses », ny « trois danses » ary ny « afro-latino ». Eo amin’ny taona kosa, hizara roa ny « trois danses » ka misy ny ho an’ny latsaky ny 14 taona sy ny mihoatra izany. Tokony ho avy amin’ny klioba ny mpifaninana rehetra, araka ny fanazavan’ny mpikarakara.
Ankoatra ny fifaninanana, miara-dalana amin’ny hetsika ny fiofanana, hatao rahampitso hatramin’ny zoma izao, raha ny marina kokoa. Natao ho an’ny mpifaninana rehetra izy ity mba hampitoviana lenta azy ireo. Na izany aza, tsy manakatom-baravarana ry zareo amin’ireo rehetra liana amin’izany.
« Miavaka ity fifaninanana ity ary tombony ho an’ny mpandihy ny mandray anjara amin’izany, satria natao ho fiomanana amin’ny fiatrehana ny « Championnat national » … ho toy ny fanazarantena », hoy ny mpanorina ny MMD, Andriamaharavo Mickaël.